U Meeting, Webinar, Messenger အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.2 | 500,000+ ထည့်သွင်းရန်
၏ဖော်ပြချက် U Meeting, Webinar, Messenger
U သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့တွင်အလုပ်လုပ်သောသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ လူတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်အသုံးပြုသည့်လူမှုရေးအက်ပ်များကဲ့သို့မြန်ဆန်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသည်။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူ၊ HD အရည်အသွေးကိုချောချောမွေ့မွေ့နှင့်လုံးဝနောက်ကျခြင်းမရှိပါ။
ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးများနှင့်လူ ၂၅ ယောက်အထိအခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအခမဲ့ပြုလုပ်ပါ။ U သည်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်လူမှုရေးနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
•အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအရည်အသွေး။ •အနိမ့်ဆုံးကျဆင်းနှုန်း -
ရိုးရှင်းသော UI နှင့်အစည်းအဝေး layout
•အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သို့မဟုတ်ပလပ်အင်မလိုအပ်ပါ။ •အစည်းအဝေးတစ်ခုကို and ည့်ခံပြီးလူများကိုဖိတ်ကြားခြင်း။ • Lag-free, full frame rate (30fps) မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်း
•အခန်းတွင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောပရိသတ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းပါ ၀ င်ပါ။ • Real-time text chat
•တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ခြင်း (သို့) slides များကို ဖြတ်၍ မည်သည့်အစီအစဉ်မှမဆိုတင်ဆက်မှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
•တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေချိန် (သို့) အော့ဖ်လိုင်းတွင်တင်ဆက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။ •“ modular” ဆလိုက်အသံဖမ်းချက်များကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ slide-by-slide အခြေခံပေါ်တွင်တည်းဖြတ်ပါ။ •သတ်မှတ်ထားသော URL တွင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်ကစားရန်ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော session တစ်ခုကိုစီစဉ်ပါ။
•အုပ်စုလိုက်စာသားများပေးပို့ခြင်း လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် Desktop မှဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အသံဖိုင်များ•ပါဝင်သူ ၁၀၀ ကျော်ဖြင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုချက်ချင်းစတင်ပါ။ •စတစ်ကာများပေးပို့ပါ။ •ဖိုင်များကိုဝေမျှရန်ပူးတွဲရိုးရှင်းစွာဆွဲချခြင်း
ဘာအသစ်လဲ U Meeting, Webinar, Messenger 6.9.0
Notify hosts you wish to speak without interrupting the flow ofameeting using the Raise Hand feature. Also in this update, you can now control how others send contact requests to you.
U Webinar | Better Online Presentations & Webinars
RecordaU meeting | U Meeting Tutorial
View and invite participants toameeting | U Meeting Tutorial
How To Install U Webinars, Meetings And Messenger App On Android
How to join the webinar by URL or ID | U Webinar Tutorial
U Meeting, Webinar, Messenger 6.7.0
U Meeting, Webinar, Messenger 6.6.1